အကြံပြုချက်များ၊ တိုင်ကြားမှုများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု မိသားစုဘဝ - မိသားစုဘဝ
မိသားစုဘဝသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တုံ့ပြန်ချက်များ၊
မိသားစုဘဝ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ၊ စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ပြည်သူလူထု ၀ င်များသည်ဆန္ဒရှိသည့်အခါအမည်မဖော်လိုသောတရားဝင်နှင့်အလွတ်သဘောတုံ့ပြန်မှုများပေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်လျှို့ဝှက်မေးခွန်းပုံစံဖြင့်ရေးသားထားသောတုံ့ပြန်ချက်များကိုဖိတ်ကြားသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်အချိန်မရွေးတိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်ချက်ကိုကြိုဆိုပါသည်။
စာရေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေရရှိသောချီးမွမ်းခြင်းသည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ယေဘုယျသဘောသဘာဝကိုမှတ်ချက်ပေးရန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုတုံ့ပြန်ချက်မေးခွန်းလွှာတောင်းရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ အောက်ကပုံစံ.
မိသားစုဘဝသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးသမာဓိရှိစွာလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ လူတို့ကသူတို့ရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုမကြာခဏမကျေနပ်နိုင်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
သင့်အနေဖြင့်အေဂျင်စီမှထောက်ပံ့ပေးသောသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်သောလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်မကျေနပ်ပါကသင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုသင်၏လေ့ကျင့်သူ (သို့) သင်၏လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ သင်၌စိုးရိမ်မှုများရှိနေသေးပါကပရိုဂရမ်မန်နေဂျာနှင့်စကားပြောနိုင်သည် (သို့) စန်ဒရမ် ၃၁၉၁၊ Bluff Road၊ Family Life ၏စီအီးအိုမိသားစုထံစာရေးဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ။ ကျေးဇူးပြုပြီးမိသားစုဘ ၀ ကိုခေါ်ပါ 03 8599 5433 ဒီအကူအညီရယူဖို့။
တုံ့ပြန်ချက်များအပါအ ၀ င်မိသားစုများနှင့်ပါ ၀ င်သူများ၏အခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို Family Life ဝန်ဆောင်မှု၏မိသားစု ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဘရိုရှာတွင်မိသားစုဘဝ ၀ န်ဆောင်မှုစတင်သောအခါပေးအပ်သည်။ တောင်းဆိုမှုအရဤဘရိုရှာတစ်စောင်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
တိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြလိုသောလက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်မခံသည့်သူများသည်စာရေးခြင်း၊ မိသားစုဘ ၀ ကို 197ff Blu Road၊ Sandringham 3191 သို့ဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ် အောက်ကပုံစံ.
မိသားစုဘဝသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတာဝန်ယူကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအေဂျင်စီ၏လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုမည်သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပြီးသိမ်းဆည်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်တိကျမှု၊ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပြည့်စုံမှုရှိစေရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောခြေလှမ်းများလှမ်းပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုံခြုံသောရုံးခန်း၊ စာရွက်စာတမ်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအစီအစဉ်များရှိသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်မိသားစုဘဝသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အရာရှိနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမိသားစုဘ ၀ ကိုခေါ်ပါ 03 8599 5433.
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အားသင်၏သတင်းနှင့်ထပ်မံသိရှိလိုပါကသင်၏အမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာ (နှင့် အကယ်၍ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်) ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်ပေးပါ။ မှတ်ချက်
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဆက်သွယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤအကွက်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ
သင်ဆက်သွယ်လိုပါကအီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းမှဆက်သွယ်လိုပါသလား။